[ May 5, 2020 ] बुढा, टेस्टेड नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्यास लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ : गगन थापा ( भिडियो सहित )	ताजा भिडियो
[ April 20, 2020 ] नायिका आँचल शर्माले गरिन् राहत वितरण	समाचार
[ April 20, 2020 ] आज मेघगर्जन, चट्याङ्ग, हावाहुरी र असिनासहित वर्षा हुन सक्ने, सतर्क रहन आग्रह	समाचार
[ April 20, 2020 ] दुर्गेश थापाको छाडा गितलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउ गरियोस !	समाचार
[ April 20, 2020 ] कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरेर एक शेयर गर्दै आज सोमबारको राशीफल पढ्नुहोस ! मनोकामना पुरा हुनेछ	समाचार
Homeसमाचारयी हुन् एम्बुलेन्स चालकले कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लान नमानेपछी आफ्नै गाडीमा अस्पताल लाने स्वास्थ्यकर्मी
April 3, 2020 Spnews समाचार Comments Off on यी हुन् एम्बुलेन्स चालकले कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लान नमानेपछी आफ्नै गाडीमा अस्पताल लाने स्वास्थ्यकर्मी
गत ४ चैतमा बेल्जियबाट आएकी बागलुङकी ६५ वर्षीया वृद्धामा को’रोना संक्रमण देखिएपछि बिहीबार बेलुका अस्पताल भ’र्ना गरिएको छ । को’रोनाको ल’क्षण नदेखिएको भन्दै उनी घरमै बस्दै आएकी थिइन् । सं’क्रमण भएको रि’पोर्ट पोजेटिभ आएपछि उनलाई विहीबार राति धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा भ’र्ना गरिएको छ । तर, अस्पताल लै’जान त्यति स’हज भने भएन ।
उनलाई लिन नेपाल रेडक्रस सो’साइटी बागलुङका एम्बुलेन्स चालक जान नमानेपछि स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले आफ्नै चालक रुद्र पराजुलीलाई लिएर वि’रामी लिन पुगेका थिए । मेयरदेखि सिडिओसमेत प’न्छिएपछि स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गुरौ अ’ग्रसर भए । पि’पिई लगाएर उनले वृद्धालाई आफ्नै गाडीमा राखेर अस्पताल पुऱ्याएका हुन् ।
ती वृद्धा छोरी भेट्न बेल्जियम गएकी थिइन् । कतार एयरको क्युआर– ६५२ विमानबाट उनी ४ चैतमै फ’र्किएकी थिइन् । सोही दिन उनी यति एयरलाइन्समार्फत पोखरा गएकोमा त्यहाँबाट स्कार्पियोमा बाग्लुङ गएकी थिइन् । बाग्लुङकै अर्की को’रोना संक्रमित युवती र उनी सँगै फर्किएका थिए । नयाँ पत्रीकाबाट
भगवानका तीन रूप मध्ये विनाशकर्ताका रूपले चिनिने भगवान शिव हिन्दु धर्मका प्रमुख देवताहरू मध्ये एक हुन् । हिन्दु धर्मका विभिन्न सम्प्रदायहरू मध्ये शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरू शिवलाई आफ्नो प्रमुख देवता मान्छन् र त्यसै अनुसार उनलाई महादेव, परमेश्वर आदि नामले सम्बोधन गर्दछन् ।
शिवलाई प्रायजसो शिव लिङ्गको रूपमा पनि पुज्ने गरिन्छ । तर, भगवान् शिव जन्मिएका होइनन् प्रकट भएका हुन् भन्ने मान्यता रहिआएको छ, जुन सायदैलाई मात्र थाहा हुन् सक्दछ । पुराणहरूमा भगवान् शिवको उत्पत्ति बारेको केही प्रसंगहरु पाइन्छ । जसलाई आज हामी चर्चा गर्नेछौँ ।
हिन्दु धर्मग्रन्थ विष्णु पुराणका अनुसार, भगवान् ब्रह्मा, भगवान् विष्णुको नाभि अथवा नाइटो कमलबाट उत्पत्ति भएका हुन् भने भगवान् शिव विष्णुको शिरको तेजबाट उत्पन्न भएका हुन् । जसकारण उनी सधैँ योगमुद्रामा रहन्छन् । एक पटक जब भगवान् विष्णु र ब्रह्मा अहंकारमा परेर आफूलाई श्रेष्ठ बताउँदै झगडा गर्न थाले तब बलिरहेको एक खम्बाबाट भगवान् शिव प्रकट भएका थिए ।
एक कथा वर्णन गरिएको पाइन्छ । जस अनुसार ब्रह्मालाई एक बालकको आवश्यकता थियो । जसकारण उनले तपस्या गरे । तब अचानक ब्रह्माको काखमा एक बालक प्रकट भए । जो रुँदै थियो । जब सो बालकलाई ब्रह्माले रुनुको कारण सोधे ।
तब त्यो बालकले आफ्नो नाम नभएका कारण रोएको बताए । त्यसपछि भगवान् ब्रह्माले उक्त बालकको नाम ‘रुद्र’ राखे जसको अर्थ हुन्छ ‘रुनेवाला’ । भगवान् ब्रह्माले सो नाम दिएर पनि शिवजी चुप लागेनन् त्यस पश्चात् ब्रह्माले बालकलाई चुप राख्न ८ नाम भने । रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान र महादेव । जसलाई पृथ्वीमा लेखिएको मान्यता छ ।
भगवान् शिवले ब्रह्माको पुत्रका रूपमा जन्म लिनुको पछाडि पनि विष्णु पुराणमा एक पौराणिक कथा छ । जसका अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्माण्ड जलमग्न थियो तब ब्रह्मा, विष्णु र शिव बाहेक अरू कोही पनि देव या प्राणी थिएनन् । तब केवल विष्णु मात्र जलको सतहमा आफ्नो शेषनागमा बसेका हुन्थे । तब उनको नाइटोबाट कमलको डाठमा भगवान् ब्रह्मा प्रकट भए । ब्रह्मा–विष्णु जब सृष्टिको सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका थिए तब शिव प्रकट भए ।
तर, ब्रह्माले उनलाई चिन्न अस्वीकार गरे। तब विष्णुले ब्रह्मालाई दिव्य दृष्टि दिएर शिवबारे याद दिलाए । त्यस पश्चात् भगवान् ब्रह्माले आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै भगवान् शिवसँग क्षमा माग्न थाले र शिवसँग पुत्रको रूपमा जन्म लिने आशीर्वाद माग्न थाले ।
जब भगवान् ब्रह्माले सृष्टिको रचना आरम्भ गर्न थाले तब उनलाई एक बच्चाको आवश्यक पर्‍यो तब उनले भगवान् शिवले दिएको आशीर्वाद सम्झिए । त्यसपछि ब्रह्माले तपस्याको माध्यमबाट बालक शिवलाई बच्चाको रूपमा आफ्नो काखमा पाए ।
बुढा, टेस्टेड नेताहरुले अब राजनीतिबाट सन्यास लिनु पर्छ, युवालाई देश चलाउन दिनु पर्छ : गगन थापा ( भिडियो सहित )
नायिका आँचल शर्माले गरिन् राहत वितरण
आज मेघगर्जन, चट्याङ्ग, हावाहुरी र असिनासहित वर्षा हुन सक्ने, सतर्क रहन आग्रह
दुर्गेश थापाको छाडा गितलाई तत्काल प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउ गरियोस !
कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गरेर एक शेयर गर्दै आज सोमबारको राशीफल पढ्नुहोस ! मनोकामना पुरा हुनेछ
कठैभरा ! १ महिनाको सुत्केरी चिउरा खादै बन्द कोठामा, यस्तो कसैलाई नपरोस (भिडियो सहित)
२ दिन विश्वभर इन्टरनेट बन्द हुनसक्छ
सरकारले गर्न नसकेको काम युवाहरुले गरेर देखाए, एकै दिनमा ७०० मजदुरलाई खुवाउछन खाना (भिडियो हेर्नुस)
काेराेनाका कारण अमेरिकामा मात्रै १० जना नेपालीकाे मृ’त्यु
२ जना नागरिक लैजान नेपाल आयो भुटानी विमान, ‘सरकारप्रति गर्व छ’ – यात्रु
Khemraj Ghimire: यो कहाँ सम्म को सत्य हो । बिस्तृतमा जानकारी पाउन सकिन्छ कि?